Ku saabsan – Tahiil.com
Barta tahiil.com ujeedkeenu waa inaan dadka ku xoojino xogta, annagoo ka dhigeyna hantida mid fudud, hufan oo aan walwal lahayn. Haddii aad bilaabeysid safarka hanti raadinta ama aad khibrad dheer aad ku leydahay hanti raadinta, tahiil.com waa meesha ugu horreysa ee dadku isugu yimaadaan si ay u baaraan una wadaagaan dareenka ay u qabaan hantida Soomaaliyeed.
Tahiil waxay u adeegtaa meertada nolosha oo buuxda ee lahaanshaha iyo ku noolaanshaha guri: iibsashada, iibinta, kireynta, maalgelinta, dib u habeynta iyo waxyaabo kale oo badan.
Tahiil Waxay ka mid tahay shirkadaha Savannah Real Estate Group, tahiil.com waxaa la aasaasay 2019 waxayna xarunteedu tahay magaalada Muqdisho, Soomaaliya.
Ku saabsan – Savannah Real Estate Group
Kooxda guryaha ee Savannah waa shirkad hormuud u ah ganacsiga xayaysiinta dhijitaalka ah ee ku takhasustay hantida. Waxaan sidoo kale ku takhas’susnay dhismaha guryaha & goobabka ganacsiga. Hawlaheena waxaa ka mid ah goobaha hoyga u ah deeganka iyo ganacsiga ee Soomaaliya, tahiil.com iyo soolnet.com.